Nahoana no zava-dehibe ny mandeha any am-piangonana? ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
Nahoana no zava-dehibe ny mandeha miangona?
4 Famakiana Min
Nahoana no zava-dehibe ny mandeha miangona?. Ny Fiangonana no toerana ihaonan'ny Kristiana hianarana bebe kokoa momba ny Tenin'Andriamanitra sy hifampaherezana. Io no toerana mety indrindra hiangonanao amin'ireo olona mitady an'Andriamanitra amin'ny alalàn'i Jesosy.
Mpino maro no mino fa tsy ilaina ny mandeha any am-piangonana mba handeha amin'ny lalan'ny finoana. Na izany aza dia mitranga izany satria tsy fantatr'izy ireo ny tena dikan'ny Fiangonana. Noho io antony io no ananantsika, nanomboka discover.online, noheverinay fa ilaina ny manazava inona ny Fiangonana ary maninona no ilaina ny manatrika azy io.
Aoka isika tsy hitsahatra hivory, toy ny mahazatra ny sasany, raha tsy mifampahery, ary mainka fa isika izao mahita fa manakaiky ny andro.
Heb. 10: 25
1 Inona ny fiangonana?
2 Nahoana no zava-dehibe ny mandeha miangona?
2.1 1. Ny fiangonana dia ny tenan'i Kristy
2.2 2. Manampy amin'ny fiatrehana ny kilemantsika
2.3 3. Manampy anao hitombo ara-panahy
Ny Fiangonana dia fitambaran'ny olona rehetra izay tia sy manaraka an'i Jesosy. Antsoin’ny Baiboly hoe tenan’i Kristy ny Fiangonana. Ny mpino rehetra dia ampahany amin'ilay vatana. Ao amin'i Kristy dia miray hina ny mpino rehetra ary tsy azo sarahina. Raha voavonjy ianao dia miray amin'ny Fiangonana iray manontolo. Ny fiangonana koa dia toerana iray hiarahan'ny mpikamban'ny Fiangonan'i Kristy hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fiombonam-bavaka.
Isika koa, na dia maro aza, dia tena iray ao amin’i Kristy, ary ny rantsambatana tsirairay dia miray amin’ny hafa rehetra.
Romana 12: 5
Talohan'ny fiangonana dia nisy sinagoga, izay toerana izay Vory ny Jiosy hidera an'Andriamanitra ary miaraka mianatra bebe kokoa momba ny soratra masina. Nanatrika sinagoga niaraka tamin'ny mpianany i Jesosy ary nanome ohatra iray ho antsika.
Aorian'ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakarana any an-danitra Jesosy, ny ny mpianatra dia nanomboka nivory tsy tapaka nidera an'Andriamanitra ary mianara tahaka ny fanaony teo amin'ny synagoga. Nanomboka tamin'ny fivoriana tany amin'ny tokotanin'ny tempoly sy tao an-tranony izy ireo, avy eo amin'ny toerana lehibe kokoa rehefa nanana mpikambana maro izy ireo. Toy izany no nitsanganan’ny fiangonana araka ny fantatsika ankehitriny.
Tsy nijanona nivory tany amin'ny tempoly nandritra ny iray andro izy ireo. Isan-trano dia namaky mofo sy nizara sakafo tamim-pifaliana sy fahalalahan-tanana izy ireo.
Asan'ny Apôstôly 2:46
1. Ny fiangonana dia ny tenan'i Kristy
Ny fiangonana dia ny Vatan'i Kristy. Tsy misy mpikambana amin'ny vatana afaka mivelona irery, raha tsy misy ny sisa amin'ny vatana. Na tiana na tsia, ny olona ao am-piangonana dia fianakaviantsika ary mila mianatra miaina miaraka amin'izy ireo isika (indrindra fa hiara-miaina amin'izy ireo mandrakizay isika).
Na ny maso tsy afaka miteny amin'ny tanana hoe: Tsy mila anao aho, na ny loha hatramin'ny rantsantanana: tsy mila anao aho.
Fa ny momba ny tena izay toa malemy no ilaina indrindra.
1 Korintiana 12: 21-22
2. Manampy amin'ny fiatrehana ny kilemantsika
Tsy misy tonga lafatra ao am-piangonana, na dia ny pasitera aza. Ny apostoly Peter dia nanao fahadisoana tamin'ny naha-mpitarika azy tany am-piangonana voalohany. Ny fiangonana dia mbola tsy toerana nisy olona tonga lafatra. Nandidy ny Eglizy Andriamanitra mba hiara-hiatrika ny tsy fahatanterahantsika.
Enga anie ny fiadanan'i Kristy hanjaka ao am-ponareo, izay niantsoana ho tena iray. Ary mankasitraka. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra ao anatinareo mbamin'ny hareny rehetra; Mihirà salamo sy fihirana ary hira ara-panahy ho an'Andriamanitra amin'ny fankasitrahana avy amin'ny fo.
Kolosiana 3: 15-16
3. Manampy anao hitombo ara-panahy
Ny mpikamban'ny fiangonana dia mifanampy, mifampahery, mifampahery, mananatra, mifampianatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy mety foana ny ataon'izy ireo, fa miaraka mianatra ny fizotrany. Mivoatra ara-panahy bebe kokoa isika rehefa miaraka amin'ny maha fiangonana antsika fa tsy mitokantokana.
Fa raha manaraka ny fahamarinana amin'ny fitiavana isika, dia aoka hitombo amin'ny zavatra rehetra amin'ny loha, dia Kristy, Avy amin'izy ireo ny vatana iray manontolo, izay mifandrindra tsara sy mampiray ny tonon-taolana rehetra mifanampy, arakaraka ny asan'ny mpikambana tsirairay, dia mahazo fitomboana mba hampiorina ny tenany amin'ny fitiavana.
Efesiana 4: 15-16
Tsy misy olana ny manana trano fiangonana, fa rehefa be ny olona dia manelingelina. Ho an'ny olona maromaro dia tsara ny manana toerana lehibe kokoa hihaonana tsy tapaka. Ny rafitra ara-dalàna kokoa amin'ny fiangonana dia manampy amin'ny fandaminana vondrona lehibe kokoa. Inona koa, ny fiangonana dia toerana hita maso ahafahan'ny tsirairay miditra avy amin'ny arabe tsy misy fanasana.
Manantena izahay fa azonao izao maninona no zava-dehibe ny mandeha miangona. Fantatsika fa olona maro diso fanantenana izy ireo rehefa mahita ny pastera na mpikambana sasany izy ireo toe-tsaina tsy kristiana. Na izany aza, dia Tena ilaina ny tsy kivy sy manampy ny hafa hahita ny lalan’i Jesosy. Ataovy ao an-tsaina fa ny mambran’ny fiangonana dia olona manana ny kilemany sy ny hatsarany toa anao, noho izany, ny fomba tsara indrindra hananganana ny Fanahin’Andriamanitra dia amin’ny alalan’ny firaisana ao amin’ny Fiangonana.
Manantena izahay fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity. Raha te hahalala ianao ny fomba famakiana Baiboly hahalalana azy. Manoro hevitra anao izahay hanohy hitety Discover.online.
Nanao ahoana ny fahazazan'i Jesosy?
Nahoana no potika i Sodoma sy Gomora?
Jolay 3, 2020